Ego nke Ebe E Si Nweta
Okwu nke ego na ọnwa
Annuity ịkwụ ụgwọ
Differentiated ịkwụ ụgwọ
Na-egosi na ego na okwu nke ego, mmasị ọnụego na ụdị ugwo.
The mgbako ga gbakọọ ego nke ịkwụ ụgwọ, ụgwọ na-eri nke n'aka.
More na ndị ọzọ ndị mmadụ maka isi ịzụrụ na iji ọrụ nke n'aka. Akụ na-abụghị ụlọ akụ oru na-enye na-enweta otuto maka a dịgasị iche iche nke ọnọdụ. Mgbe ị na-si a nnukwu ego ka ihe atụ, ịzụtara, a ụgbọala, a ego na-ewu ụlọ ma ọ bụ azụmahịa mmepe, ọ dị mkpa ịmata na nke a ego ị ga-enwe ike ime. Iji jide n'aka na nke ị na-ahọrọ a ego usoro awade ka anyị jiri ego mgbako. Tinye na kwesịrị ekwesị ubi ego ego, ịkwụ ụgwọ oge ọnwa na mmasị ọnụego, nakwa dị ka họrọ ụdị nke ịkwụ ụgwọ - na annuity ma ọ bụ differentiated, ị ga-chọpụta nke akụkụ nke ego na mbinye ego bụ iji kwụọ ụgwọ ndị ụgwọ ha ji, na ihe ịkwụ ụgwọ nke mmasị na mbinye ego, na itule ya ụgwọ site ọnwa, ego nke overpayment dị ka otu ọnwa, na dum ego okwu, na ezigbo mmasị ọnụego na mbinye ego.
The differentiated usoro nke ịkwụ ụgwọ nke ji na mbinye ego ego nke ego na-ekewa hà mbak. Ndị a mbak mejupụtara nnukwu nke ọnwa ịkwụ ụgwọ. The mmapụta òkè na-anọchi anya mmasị na-adịghị akwụ ụgwọ na itule mbinye ego. N'ihi ya site n'ọnwa ruo n'ọnwa ego nke ịkwụ ụgwọ mbelata.
Na usoro a nke ego ịkwụ ụgwọ nwere flaws.
Chief n'etiti ha bụ eziokwu na ego na-akwụ ụgwọ ha ji dị otú a bụ ihe siri ike inweta.
The akụ nwere gbakọọ kacha ego nke ego, dabere na eziokwu ma na-agbaziri agbaziri bụ ike akwụ mbụ nkeji nkeji. Nke a pụtara na iji nweta ndị dị otú ahụ a ego a chọrọ iji nwere a elu-ezuru ego. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ pụrụ inyere ịgbapụta guarantors ma ọ bụ ngalaba-borrowers mma.
Ọzọ drawback bụ na ọkara mbụ nke ịkwụ ụgwọ maka na-agbaziri agbaziri bụ karịsịa ike. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere ihe mgbazinye ego Ọ pụrụ ịghọ a ibu arọ n'ihi na-agbaziri agbaziri. Ma n'ọdịnihu, nke a pụrụ ghọọ a enweghị ùgwù. Onu oriri na-adalata adalata mmasị ego mere obere onerous.
Ná annuity usoro nke ịkwụ ụgwọ nke ji na mbinye ego na-ekewa hà akụkụ bụghị nanị ego nke ụgwọ, kamakwa mmasị na ya maka dum ego okwu. N'ihi ya, na-agbaziri agbaziri akwụ onyinye hà nhata n'elu ndụ nke ịkwụ ụgwọ. Taa, a na usoro nke ịkwụ ụgwọ na-eji ọtụtụ azụmahịa bịara n'ikperé mmiri. Isi drawback nke annuity ịkwụ ụgwọ na ego nke overpayment na mbinye ego ga-elu karịa na differentiated usoro. Ke adianade do Annuity ịkwụ ụgwọ usoro putara na mbụ ọkara nke ego okwu ị na-akwụ ukwuu n'ime mmasị na mbinye ego. Ma isi ego nke ụgwọ n'oge a na-anọgide na ọ fọrọ nke nta emetụta.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ime otuto maka a ego buru ibu na-adịghị Akpara kwụọ ya nká, ị ga-anabata a ego na annuity ugwo usoro.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, karịsịa mgbe ọ na-abịa ogologo oge mgbazinye ego, ọ ka mma ịhọrọ akụ na awade mgbazinye ego na differentiated ịkwụ ụgwọ.